Ntu ịghasa, drywall ịghasa, ịghasa ọkwọ ụgbọala, Ground ịghasa - Weifeng
Ningbo Weiifeng fastener Co., Ltd na-emi odude Yuyao City nke dị mfe nke ohere. Ọ na-ewe ọkara awa iji Ningbo obodo site elu n'ụzọ ka 3 awa na Shanghai City. Anyị ụlọ ọrụ pụrụ iche ngwaike ihe atụ arịlịka, kposara, bolts, akụ na ngwaọrụ. Anyị na ndị òtù nwere ọtụtụ ọma ndị mere na akara nke a na ubi anyị na-enye ngwaahịa na elu àgwà na nke ezi uche price nakwa dị ka anyị tụlee ọrụ. E wezụga n'ichepụta, anyị na-emeso na-eduzi bubata na-ebupụ business.Our na ngwaahịa ndị dị iche iche na iche iche, dị ndị na-esonụ ụkpụrụ: GB, DIN, JIS na ANSI na anyị nwere ike na-anabata iwu nke ọzọ nkọwapụta dị ka ndị ahịa na-arịọ dị anyị ụtọ igosi mma ogologo oge ekwenye mmekọrita ụgbọ mmiri ahụ na anyị na ndị ahịa na ndabere nke ịha nhata na ibe uru.
Hex Washer Head Self Drilling kposara
Hex Flange onwe mkpọpu ala ịghasa na washer
pan Framing isi onwe-na ịme ọpịpị ịghasa
pan isi Phillips ịghasa
pan isi onwe-na ịme ọpịpị kposara
Phillips drive ịghasa
Phillips ewepụghị isi onwe-na ịme ọpịpị ịghasa
Okwu: Tinye: 16 Ft, ZhongMu International mansion, No.398 South NanLei Road, Yuyao, Zhejiang, China